Sony Xperia 10 III zuva rekuburitsa, runyerekupe, maficha uye maficha - WebSetNet
Sony Xperia 10 III zuva rekuburitsa, runyerekupe, maficha uye maficha
By Justin26 | April 12, 2021
Sony Mobile inowanzozivisa mafoni mashoma pagore. Mushure mezita remazita shanduko mu2019, aya marange ave kuzivikanwa se Xperia 1, Xperia 5 uye Xperia 10.
Iyo Xperia 10 inogara mukati memusika wepakati-renji, kunyange ichitora mamwe maitiro kubva kumureza Xperia 1. Takaona iyo Xperia 10 II (Xperia 10 makaviri) kuvhurwa muhafu yekutanga ye2020 padivi peiyo Xperia 1 II, saka isu tiri kutarisira iyo yechitatu chizvarwa modhi munguva pfupi iri kutevera.
Hezvino zvese zvatakanzwa kusvika parizvino nezve iyo Sony Xperia 10 III.
Kusunungurwa zuva uye mutengo
Inotarisirwa 14 Kubvumbi 2021
Kutenderedza £ 300- £ 350 muUK
Sony Mobile inowanzozivisa maapuro emafoni efoni kuma tradeshows Mobile World Congress uye IFA. Izvo hazviwanzo kuita zvakasiyana zviitiko senge Samsung uye apuro. Nedenda repasirese rinoreva shanduko shoma kumatengesi, zvinoita sekunge Sony Mobile yakasarudzawo chiitiko chakasiyana gore rino, nemusi wa14 Kubvumbi wakatemerwa chiziviso cheChristian Chigadzirwa.
Kunyangwe Sony isina kuzivisa izvo Xperia chigadzirwa zvichaburitswa musi wa14 Kubvumbi, iyo Xperia 10 III inotarisirwa, pamwe neiyo mureza Xperia 1 III.
Panyaya yemutengo, iyo Xperia 10 II inodhura £ 319 muUK (yakatenderedza $ 399). Isu tinotarisira yakafanana ballpark yeiyo Xperia 10 III, asi zvingave zvakanaka kuti uione pasi peiyo £ 300 mucherechedzo muUK.
Maitiro ekuona chiitiko cheXperia musi wa14 Kubvumbi
IP65 / 68 inodzivirira mvura
Zvichienderana nekudonha, zvinoita kunge iyo Sony Xperia 10 II icharatidza dhizaini yakafanana kune yakatangira. Kugadziriswa kwepamusoro kunopa chiratidzo cheplab slab dhiza nemakona akapoteredzwa sezvatave kutarisira kubva kunaSony pamusoro pemakore, iine bezel kumusoro kwechiratidziro ichigara pamberi pekamera. Tinotarisira kuona girazi kumashure seXperia 10 II.
Inotaridzika sekamera katatu kumashure ichave yakamiswa pakona yepamusoro kuruboshwe kumashure uye isu taizotarisira kuona iyo IP65 / 68 inodzivirira mvura iyo yakaunzwa pane iyo Xperia 10 renji neyechipiri chizvarwa modhi, ichiita kudzoka muXperia 10 III.
Inzwa yeminwe yeminwe inoita kunge iripo zvekare kurudyi-ruoko kumucheto kwechigadzirwa. Kuburitswa kunoratidza mudziyo mutema, asi hazvingashamise kuona iyo Sony Xperia 10 III ichiuya ichena futi, sezvakaita Xperia 10 II. Kuyera kwakayerwa kunonzi kuri 154.4mm x 68.4mm x 8.3mm, inova yakafanana neiyo Xperia 10 II, ingori 0.1mm mukobvu.
6-inch, Yakazara HD
21: 9 yakaenzana nechiyero
Iyo Sony Xperia 10 II inoratidzira 6-inch OLED kuratidza ine 21: 9 factor ratio uye zvakafanana zvinotarisirwa paXperia 10 III. Sony yakachinjira kuOLED yeiyo Xperia 10 renji muXperia 10 II saka zvinogona kushamisa kuiona ichidzokera kuLCD.
Iyo 21: 9 factor ratio - yakanaka kumafirimu - yanga iri dingindira rakajairika remaoko eSony Xperia kubvira pakatangwa iyo Xperia 1 uye Xperia 10 muna 2019 uye mifananidzo yakaburitswa inoratidza iyi fomu refu, yakatetepa iri kugara. Iyo Xperia 10 renji pakutanga yaive nemaoko maviri mairi mukati mayo - iyo Xperia 10 uye iyo Xperia 10 Uyezve - asi muna 2020, Sony yakapa imwe chete sarudzo saka tinotarisira kuti ichaenderera iyo Xperia 10 III.
Pane Full HD resolution pane iyo Xperia 10 II, iyo yatinofungidzira kuti Xperia 10 III ichapawo, ichichengetedza resolution yepamusoro yeXperia 1.
Hardware uye specs
Makuhwa anoisa iyo Sony Xperia 10 III senge ine Qualcomm Snapdragon 765G chikuva pasi payo hood, pamwe ne6GB ye RAM. Wakafanotungamira ane iyo Snapdragon 665 chipset ine 4GB ye RAM, saka nepo paine nyowani Snapdragon 6-dzakateedzana chip, iyo SD765G inogonesa kwazvo processor, inowanikwa mune akati wandei mafoni emafoni uye kuwedzera kwe RAM kunozogamuchirwawo.
Izvo zvaizorevawo kuti Xperia 10 III ichave 5G inokwanisa - yekutanga yeiyi renji.
Iyo Xperia 10 II yaive ne128GB yekuchengetera saka isu taizotarisira zvirinani kune iyo Xperia 10 III uye isu tinotarisira bhatiri kutenderedza 3500mAh - netariro yakakura - kunyangwe pasina chinhu chakamboparadzirwa mubazi rino parizvino.
Katatu kumashure kamera
Izvozvi hazvisi pachena izvo kamera yakatarwa neXperia 10 III ichapa kumashure, kunyangwe zvichibva pamifananidzo yakaburitswa, kamera yekumashure katatu zvakare inotarisirwa. Iyo yekumberi kamera inonzi inonzi 8-megapixel snapper.
Iyo Xperia 10 II inouya iine 12-megapixel main kamera, uye 8-megapixel Ultra-yakafara uye telephoto kamera, iyo iyo Xperia 10 III inonzi zvakare inayo. Isu taizotarisira kuvandudzwa maererano nezvimiro uye mhedzisiro kunyangwe iyo hardware ikaramba yakafanana kunyange.
Sony Xperia 10 III runyerekupe: Chii chaitika kusvika parizvino?
8 Kubvumbi 2021: Sony inoseka Xperia I III mumavhidhiyo maviri epamutemo eYouTube
Sony yakaburitsa maviri YouTube mavhidhiyo kuseka iyo Xperia 1 III uye Xperia 10 III kuvhurwa. Kwete zvakawanda zvakapihwa asi kune akati wandei madiki madiki.
6 Kubvumbi 2021: Sony Xperia 10 III dhizaini inodonha nekuda kwemugadziri wenyaya
Nyaya inogadzira Olixir inoita kunge yakaburitsa dhizaini Sony Xperia 10 III nekuda kweimwe mhando yepamusoro inoratidza kuratidzwa kwemitambo dhizaini yayo. PocketNow, zvakare inotsanangura zvimwe zvisipo, kusanganisira iyo 8-megapixel yekumberi kamera.
2 Kubvumbi 2021: Sony inosimbisa chiitiko cheXperia
Sony yakazivisa munzira dzayo dzekudyidzana kuti chiitiko cheXperia chaizoitika musi wa14 Kubvumbi.
17 Kukadzi 2021: Sony Xperia 10 III ine Qualcomm Snapdragon 765G uye 6GB RAM inoonekwa paGeekbench
Chizvarwa chechitatu chepakati-renji Xperia 10 akaonekwa paGeekbench iine iyo Qualcomm lito chikuva - inova iyo Snapdragon 765G - inotsigirwa ne6GB ye RAM.
15 Kukadzi 2021: Sony Xperia 10 III kuve neakaenzana kamera mutoro
Gizmo China akadaro iyo Sony Xperia 10 III ichave iine 12-megapixel main kamera, 8-megapixel Ultra-Wide kamera uye 8-megapixel telephoto camara kumashure, kufanana neXperia 10 II.
21 Ndira 2021: Sony Xperia 10 III mifananidzo inodonha
Leaker Steve Hemmerstoffer yakaratidza mimwe mifananidzo yeiyo Sony Xperia 10 III pachikuva cheIzwi.
kuunganidza: Steve Hemmerstoffer kuvuza
18 Mbudzi 2020: Sony Xperia 10 III ichauya neSpapdragon 690
GSM Arena yakurudzirwa iyo Sony Xperia 10 III ichauya neiyo Qualcomm Snapdragon 690 processor. Yakati zvakare zviyero zvichave 154.4mm x 68.4mm x 8.3mm yechitatu-gen mudziyo.
Sony Xperia 1 III: Zvese zvatinoziva kusvika parizvino uye zvatiri kuda kuona
← Instagram Nyaya matipi uye manomano: Iwo wekupedzisira gwara revatambi venhau Audio Pro's C10 Mk II ndeye nyowani AirPlay 2 uye Google Cast multiroom mutauri →